Nandeha tamin’ny zotra Cotisse nihazo an’i Toamasina izy ireo ny 8 aprily, ary nifampitakosona tamin’ilay olona voamarina fa voa. Ny 4 no mbola tsy tratra antso mihitsy, dia Rtoa Raholimalala, izay diso ny laharana nomony, Elga Chan, Rahariseheno Samueline, ary Rtoa Roxane, hoy ny Minisitry ny serasera sy ny kolontsaina Lalatiana Andriatongarivo. Avy any Maroantsetra ireto telo farany. Azon’izy ireo antsoina ny laharana 034 47 184 90. Ilaina haingana hanao fitiliana ireo olona niray fiara. Efa lava izay elanelana izay satria efa 21 andro izany no tany amin’izay nisy azy ireo olona ireo. Mety nivezivezy sy nifanerasera taman’olona tsy tambo isaina. Raha sanatria efa nisy nifindran’ilay voa niray fiara taminy, dia ho sarotra ny toe-drahara. Na mbola tsy misy soritr’aretina aza, dia afaka mamindra rahateo ny olona mety efa voa na ilay antsoina hoe: “porteurs sains”. Mikasika ilay tambavy koa dia nanapa-kevitra ny Minisiteran’ny serasera sy ny kolontsaina sy ny Minisiteran’ny Fampianarana ambony ny hanao fandaharana manokana momba ny covid organics, ka profesora anankitelo no asaina miteny hitondra fanazavana: Pr Rafatro, Pr Rakotovao, Pr Ramanitrahasimbola. Ny laharana 910 no azo antsoina handraisana ireo fanontaniana.